थाहा पाउनुहोस, महिलाहरु किन अपरिचित पुरुषसंग उत्तेजित हुन्छन् ? – Hamrosandesh.com
थाहा पाउनुहोस, महिलाहरु किन अपरिचित पुरुषसंग उत्तेजित हुन्छन् ?
शारिरक सम्बन्धलाई राम्रो विचारले सोचे राम्रै हुन्छ । नराम्रो विचारले सोचे नराम्रो हुन्छ जब शारिरक सम्बन्धलाई नराम्रो बिचारले हेर्ने गरिन्छ । तब शारिरक सम्बन्ध जतिको घृणित कुरा केहि नहुने अध्ययनहरुले देखाउँदै आएका छन् ।
यस बिषयमा भन्नु पर्दा नारीहरु लजालु र जाली पनि हुने गर्दछन् भन्ने निष्कर्ष अध्यनहरुले बताएका छन् ।प्राय स्त्रीले आफ्नो जीवनमा विभिन्न खालको शारिरक सम्बन्ध फरक ढाँचा ,फरक विचार ,कसैको दवाब बिना स्वत्रन्त्र पूर्वक अनुभव गर्न चाहने गरेको दावी गर्दै प्रतिवेदन बाहिर आएको हो । फुर्सद मिल्दा विभिन्न प्रकारका शारिरक सम्बन्ध परीक्षण समेत गर्न मन पराउने उल्लेख गरेका छन् अध्ययनले प्रायस् जसो महिला अपरिचित पुरुषसंग शारिरक सम्बन्ध राख्न मन पराउछन र उत्तेजित हुन्छन किनभने अपिरिचितसँग शारिरक सम्बन्ध राख्दा सबै सिमाहरु भुलेर रमाइलो गर्न पाइन्छ भन्ने सोचाई हुन्छ । तर कतिपय अवस्थामा पुरुषहरुले छुदा रिस उठ्ने, नराम्रो लाग्ने हुन्छ।
महिलाहरु अपरिचित पुरुष संग उ’त्तेजित हुन्छन ।महिलाहरु पहिलो शारिरक सम्बन्धबारे उनीहरु सँधै सोंचिरहन्छन् । समाजले जे सुकै सोचोस् , भनोस तर आफुले माया गरेको पुरुषसँग एक रात बिताउने चाहाना हरेक स्त्रीमा हुन्छ । यि स्त्रीहरुले शारिरक सम्बन्धलाई सन्तुलित भोजन जस्तै आवश्यकताका रुपमा लिएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।ऐजेन्सी ।